အသံနဲ့ unlock လုပ်တဲ့ စွမ်းရည် ဖယ်ရှားခံလိုက်ရတဲ့ Pixel3– AsiaApps
နောက်ဆုံးထွက် Pixel3နဲ့ Pixel 3XL ဖုန်းတွေမှာ အသံနဲ့ lock ဖြည်တဲ့ function ကို Google မှ တိတ်တဆိတ် ဖယ်ရှားလိုက်ပါတယ်။ အဆိုပါ feature က အရင်က Pixel 3, Pixel 3XL ဖုန်းအဟောင်းတွေမှာတော့ ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပြီး အသုံးပြုသူတွေကို အသံနဲ့ lock ဖြည်ခွင့် ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုအချိန်မှာတော့ Google က အဆိုပါfeature ကို ဆက်လက်ပြီး available ဖြစ်ခွင့် မပေးတော့ဘူးလို့ ပြောထားပါတယ်။
အဲ့တာကြောင့် Pixel3ဖုန်းတွေမှာ “OK Google”လို့ ပြောပြီး unlock လုပ်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ အဲ့ဒီအစား သင့်ရဲ့ lock screen ပေါ်မှာ Google assistant ကို အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။” အဆိုပါသတင်းက Pixel3 မှာ ကြီးမားတဲ့ function ပြောင်းလဲမှုကို မြင်တွေ့ရဖို့ မျှော်လင့်ထားတဲ့ Pixel ပိုင်ရှင်တွေအတွက်တော့ ကြီးမားတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ။
Google မှ အဆိုပါ feature ကိုဘာကြောင့် ဖယ်ရှားခဲ့လဲ ဆိုတာကိုတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။ သီအိုရီအရတော့ ဖယ်ရှားလိုက်တဲ့ Voice Match feature ဟာ security ပိုင်းအရ လုံခြုံမှုမရှိဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အသံနဲ့ lock ဖြည်လို့ ရတာကြောင့် တူညီတဲ့ အသံ (သို့) recording လုပ်ထားတဲ့ အသံတွေနဲ့ ဖုန်းကို အသာကလေး ဖွင့်လို့ရတာကြောင့်ပါ။ ဒုတိယ အကြောင်းအရင်းကတော့ unlock လုပ်ရာမှာ ပိုပြီး သေချာစေတဲ့ Google Assistant ကို အသုံးပြုစေချင်လို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဘာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် Pixel3နဲ့ Pixel 3XL တွေအတွက် မှန်းထားတဲ့ Voice Match feature ကို သုံးလို့ မရတော့ဘူးဆိုတာတော့ သေချာသွားပါပြီ။
ကဲ.. ဘယ်လိုလဲ??? Google ရဲ့ အခု လုပ်ဆောင်ချက်ကို Asiaapps က Pixel ဖန်တွေကော ဘယ်လိုမြင်ကြလဲ??? :D:D:D
Source – https://www.theverge.com